नाच्न र गाउन नपाएको रात निद्रा पर्दैन : सीता कँडेल | चितवन पोष्ट दैनिक
नाच्न र गाउन नपाएको रात निद्रा पर्दैन : सीता कँडेल
२०७६ जेष्ठ १२, आईतवार ०८:२१ गते
लोकदोहोरीको पर्याय भइसकेकी छन् रत्ननगर १ सौराहाचोक निवासी ४० वर्षीया लोकगायिका सीता कँडेल । लोकदोहोरी क्षेत्रमा चर्चित उनको दैनिकी भन्नु नै लोकदोहोरी गाउने र नाच्ने रहेको छ । सानैदेखि नाच्न र गाउन भनेपछि हुरुक्कै हुने उनी व्यावसायिकरुपमा भने ०५८ सालदेखि लागिपरेकी हुन् । राष्ट्रिय लोकदोहोरी प्रतिष्ठान चितवनकी उपाध्यक्ष एवम् नारायणी अञ्चल उपाध्यक्ष रहेर लोकसंस्कृति जर्गेना गर्ने अभियानमा जुटेकी उनले घुम्ती दोहरीमार्फत् गाउँगाउँमा नवप्रतिभाको खोजी गरी प्रतिभा उजागर गराउन, लोकसंस्कृति रक्षाका लागि विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र नवप्रवेशीहरुलाई संरक्षण गर्न उत्तिकै तल्लीन रहेकी छन् । थुप्रै सामाजिक संघसंस्थामा आवद्ध उनी नेतृत्व विकासदेखि व्यक्तित्व विकास अभिवृद्धि गराउने कार्यक्रमहरुमा पनि उत्तिकै क्रियाशील छिन् ।
उनले आधादर्जन तीज गीतको म्युजिक भिडियो निकालेर देशविदेशमा चर्चा कमाएकी छन् । चितवन युवा समूह अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिकी सांस्कृतिक संयोजकसमेत रहेकी उनी बेलाबेलामा विदेशमा समेत स्टेज कार्यक्रम प्रस्तुत गर्छिन् । लोकसंस्कृतिलाई आफ्नो प्राण ठान्ने उनले २०७० सालमा लोकदोहोरीतर्फबाट ‘कालिका म्युजिक अवार्ड’ हासिल गरिसकेकी छन् । एकदिन नाच्न र गाउन नपाएको रात निद्रा नपर्ने बताउने उनले रत्ननगर १ स्थित सौराहाचोकमा ‘राइनो दोहोरी साँझ तथा रोधी घर’ सञ्चालन गरेकी छन् । जहाँ युवादेखि अधवैंशेहरुलाई दोहोरीमा झुमाएर मनोरञ्जन प्रदान गर्दै आएकी छन् । प्रस्तुत छ, लोकसंस्कृति भनेपछि हुरुक्क हुने गायिका कँडेलसँग चितवनपोष्ट दैनिकका सहसम्पादक केशव भट्टराईले गरेको संवाद–
१) खुवै व्यस्त देखिनुहुन्छ । के गर्दै हुनुहुन्छ ?
–लोकसंस्कृतिको जर्गेना गर्ने काममै व्यस्त भएकी छ । भर्खरैमात्र राष्ट्रिय लोकदोहोरी प्रतिष्ठानमा आवद्ध भएको नाताले नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञाप्रतिष्ठानद्वारा आयोजित बहुसांस्कृतिक महाउत्सवमा संयोजनको भूमिका निभाएकी छु । प्रतिष्ठान स्वयं पनि सहआयोजक भएकाले यस कार्यक्रमलाई सफल बनाउन लागिपरेँ । चितवनका बहुजाति र बहुभाषीहरुलाई एउटै थलोमा ल्याएर बृहत् सांस्कृतिक कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छौँ । अग्रज लोकगायिका हरिदेवी कोइरालाज्यूको प्रमुख आतिथ्यतामा चितवनभरिका १२५ भेषभूषा र भाषाभाषीको सांस्कृतिक उत्सव शुक्रबार रत्ननगरमा आयोजना गर्न सक्यौँ । कलासंस्कृति, मनोरञ्जन र लोकदोहोरीकै क्षेत्रमा म हरबखत व्यस्त भइरहन्छु ।
२) लोकसंस्कृति जर्गेना गर्नेखालका केकस्ता काम गर्नुभयो ?
–मैले औपचारिकरुपमा ०५८ सालदेखि निलगिरी दोहोरी साँझमार्फत् यस क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हुँ । लोकसंस्कृति जर्गेना गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय लोकदोहोरी प्रतिष्ठानमार्फत् गाउँगाउँमा रहेका बस्तीभित्रका हस्तीहरु खोजी गर्नेक्रममा लोक घुम्ती कार्र्यक्रमहरु सञ्चालन गरेँ । नवप्रवेशी भाइबहिनीहरुलाई यो क्षेत्रमा ल्याएर उनीहरुभित्र रहेको कला क्षमता प्रस्फुटन गराउन आफैँले संरक्षण र सेल्टर दिने काम पनि गरिरहेकी छु । भौगोलिक हिसावले सुदूर भूभागमा रहनुहुने साथीहरुलाई मैले व्यवस्थापन गर्ने गर्छु । मेरो बलबुताले भेटेसम्म कलासंस्कृतिमा लाग्ने जोकसैलाई सक्दो सहयोग गर्न तयार छु ।
३) तपाईंको लोकदोहोरी यात्रा कसरी चल्दै छ ?
–एकदम राम्रोसँग चलिरहेको छ । गीत गुनगुनाउन थालेदेखि अहिलेसम्म म नपुगेका र स्टेज नचढेका ठाउँहरु बिरलै होलान् । विदेशमा बोलावट भएका बेला जान्छु । दुईपटक कतार गएर आएँ । सोही अवसरमा एउटा म्युजिक भिडियो उतै सुटिङ गरेर आएँ । मेलामहोत्सवहरुमा मेरो उपस्थिति भइरहन्छ । स्टेज कार्यक्रममा बोलाएको ठाउँमा ठूलो नभईकन जाने मेरो बानी छ । कसैले आदरसम्मान गरेर बोलाएको ठाउँमा जान पाउनु र दर्शकस्रोतामा आफ्नो प्रस्तुति देखाउन पाउनु आफैँमा ठूलो सन्तुष्टि र अवसर हो । लोकसंस्कृतिको संरक्षण र लोकदोहोरीका पारखीलाई मनोरञ्जन प्रदान गर्न सौराहाचोकमा राइनो दोहोरी साँझ सञ्चालन गरेकी छु । कला र मनोरञ्जनसँगै प्रत्यक्षरुपमा १५ जना कलाकार भाइबहिनीलाई रोजगार प्रदान गरेकी छु । सबैले आफ्नो कला क्षमता उजागर गरिरहेका छन् ।
४) लोकदोहोरीमा लागेर जीविका चलाउन सकिँदैन भन्छन् नि ?
–हेर्नुस्, पहिले र अहिलेको समयमा फरक भइसक्यो । लोकदोहोरीमा लागेर घरमै बसेर हुँदैन । आफ्नो कला क्षमता सम्बन्धित क्षेत्रमा पस्किनुपर्छ । मेरो सवालमा मलाई कसैले पाल्न परेको छैन । म मेरो क्षमता र परिश्रमअनुसारको कमाइ गरिरहेकी छु । म नेपालका मेलामहोत्सवहरुमा नपुगेको ठाउँ बिरलै होला । कुनै पनि कार्यक्रममा जाँदा पारिश्रमिकवापत मलाई यति रकम देऊ भनेर कहीँकतै भनेको छैन र भन्दिन पनि । स्टेज कार्यक्रम वा सांस्कृतिक कार्यक्रममा आमन्त्रण गर्नुहुनेले जेजति दिनुहुन्छ त्यत्ति नै हात थाप्छु । तपाईं आफ्नो स्वविवेकले दिनुहोला जति दिए पनि हुन्छ भनिदिन्छु । यो क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुन आफ्नो कला र क्षमता पनि हुनुपर्छ । त्यसका लागि साधना पनि चाहिन्छ । दर्शकलाई नचाउन सकियो भने कलाकारको जीविकामात्रै होइन प्रशस्त कमाउन सकिन्छ । मैले पनि आफूलाई चाहिने र पुग्ने नाचेर र गाएरै कमाएकी छु ।
५) भनेपछि तपाईं यो क्षेत्रमा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
–अवश्य छु । मैले यो क्षेत्रमा लागेर केही पनि गुमाएको छैन । सबथोक यही क्षेत्रबाट प्राप्त गरेकी छु । प्रसस्त मानसम्मान र इज्जत पाएकी छु । दर्शकले सीता कँडेल भनेर चिन्नुहुन्छ । सम्मान दर्शाउनुहुन्छ । स्टेज चढ्दा दर्शकले दर्शाएको मायाममताले सन्तुष्टि दिन्छ । म ३६५ दिन नै लोकदोहोरीका क्षेत्रमा रमाइरहेको छु । मैले कुनै दिन नाच्न र गाउन पाइन भने रातभर निद्रा पर्दैन । मेरो नृत्यकर्म भन्नुस् या सौख नै लोकदोहोरी हो । यसबाट अलग भएर म बाँच्न सक्दिन । देशविदेशका लाखौँ दर्शकको मन जित्न सकेको कारण मलाई कत्ति दुःखको महसुस भएको छैन ।
६) लोकदोहोरी फोहोरी हुँदैछ नि, तपाईंलाई के लाग्छ ?
–लोकदोहोरी भद्दा मनोरञ्जनका लागि हुनुहुँदैन । यसले नेपाली कलासंस्कृति, लोकभाका र सन्देश पनि दिने खालको हुनुपर्छ । हरिदेवी कोइराला किन आजसम्म पनि सम्मानित हुनुहुन्छ ? उहाँको नामले नै कलासंस्कृतिको श्रद्धाभाव दर्शाउँछ । उहाँले जस्तोपायो उस्तै र जेपायो त्यही गीत गाउनुभएको भए पुस्तौँसम्म लोकप्रिय हुनुहुन्थेन । लोकदोहोरीका नाममा उत्ताउला र फोहोरी शब्द मिसाएर केहीले बदनाम गरेका छन् । सबै लोकदोहोरी गीतहरु फोहोरी छैनन् । सन्देश बोकेका मार्मिक गीतहरु युगौँसम्म रहिरहन्छन् । र, इतिहास कायम पनि गर्छन् । सस्तो लोकप्रियताका लागि गाइने विकृत गीतहरुले संस्कृतिको जर्गेना गर्दैनन् । दर्शक स्रोताहरुले नै त्यस्ता विकृत गीतहरु बहिस्कार गर्छन् ।
७) दोहोरी साँझ पनि सञ्चालन गर्नुहुन्छ ? कत्तिको नचाउनुहुन्छ ?
–सीता कँडेलको दोहोरी भनेर दर्शक तथा शुभचिन्तकहरु टाढा–टाढादेखि आउनुहुन्छ । उहाँहरुलाई भरपूर मनोरञ्जन गराउनु हाम्रो लक्ष्य हो । अन्यन्त्र नाच्ने–गाउने नगर्नेहरु पनि दोहोरो साँझमा आएपछि निर्धक्क भएर आफ्नो कला देखाउनुहुन्छ । नाच्नुहुन्छ, गाउनुहुन्छ रमाउनुहुन्छ । पेसा–व्यवसाय आफ्नो ठाउँमा छ । कमसेकम ग्राहकहरुलाई लोकसंस्कृतिको सन्देश दिलाउनु पनि हाम्रो व्यावसायिक धर्म हो । दोहोरीसाँझमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका भाइबहिनीहरुले आफ्नो कला र प्रस्तुति देखाउनुहुन्छ । गीतसंगीतको माध्यमबाट दर्शकहरुलाई खुसी बनाएर पठाउनुहुन्छ । मरेरै लाने त कसैले केही पनि होइन । कहिलेकाहीँ नाच्न गाउन र मनोरञ्जन गर्न त सबैलाई मन लागिहाल्छ । त्यो आवश्यकता राइनो दोहोरी साँझले पूरा गरेको छ ।
८) लोकदोहोरीका नयाँ पुस्ताका लागि के सन्देश दिनुहुन्छ ?
–हरेक व्यक्तिमा केही न केही अन्तर्निहित क्षमता लुकेर रहेको हुन्छ । कसैलाई मसँग यो क्षमता छ भन्ने थाहा हुन्छ, कसैलाई हुँदैन फरक त्यत्ति हो । कला र क्षमता भएर पनि प्रस्फुटन गर्ने मौका नपाएका, आफूभित्र लुकेर रहेको प्रतिभालाई उजागर गर्ने माध्यम नभएका सबै नयाँ पुस्ताका भाइबहिनीहरुका लागि राइनो दोहोरी साँझा एउटा ‘प्लेटफर्म’ हो । कति भाइबहिनीहरुले यहीँ आएर आफूलाई अब्बल गायक÷गायिका बनाएका छन् । जहाँ रहेर पनि कला र संस्कृतिको जर्गेना गर्ने मेरो उद्देश्य रहेको हुँदा आफ्नो कलालाई तिखार्न चाहने भाइबहिनीलाई निःशुल्करुपमा त्यो अवसर खुला गरेको छु । कसैले पनि जन्मिँदैमा सबैकुरा सिकेर आएका हुँदैनन् । परिपूर्ण कोही हुँदैन । आफू सिक्ने र अरुलाई पनि सिकाउने थलो लोकसंस्कृति नै हो । त्यो चाहे स्टेज कार्यक्रम होस् चाहे दोहोरी साँझ । आफ्नो प्रतिभालाई उजागर गरौँ । नेपाली कलासंस्कृति र भेषभूषाको संरक्षण र संवद्र्धनमा जुटौँ । प्रतिभावान् सबै भाइबहिनीलाई म हार्दिक स्वागत गर्छु ।